Bit By Bit - Ethics - 6.4.4 Kuremekedza Mutemo uye Public Interest
Kuremekedza Mutemo uye Public Kufarira kunosvika nheyo Beneficence mhiri dzakananga mutsvagurudzo kusanganisira zvose akakodzera vane chekuita.
Yechina uye yekupedzisira inhungamiro inogona kutungamirira mafungiro ako Kuremekedza Mutemo uye Kufarira Kwevanhu. Iyi nheyo inobva kuThe Menlo Report, uye naizvozvo inogona kunge isingazivikanwi zvikuru nevatsvakurudzi vemagariro evanhu. The Menlo Report inotaura kuti mutemo weKuremekedza Mutemo uye Kufarira kwevanhu kunobatanidzwa munheyo yeBunficence, asi inotaurawo kuti yekare yakakodzera kufungisisa. Kunyanya, apo Beneficence inowanzotarisa kune vatori vechikamu, Kuremekedzwa kweMitemo neHurumende inokurudzira zvakajeka vanotsvakurudza kutora maonero akawandisa uye kusanganisira mutemo mukufunga kwavo.
MuInternational Report, Kuremekedza Mutemo uye Kufarira Kwevanhu kune zvikamu zviviri zvakasiyana-siyana: (1) kuterera uye (2) kusununguka-kutarisana nekuzvidavirira. Kuteerera kunoreva kuti vatsvakurudzi vanofanira kuedza kuziva nekuteerera mitemo yakakodzera, zvibvumirano, nemitemo yebasa. Semuenzaniso, kuterera kunoreva kuti muongorori anofunga kugadzira zvinyorwa zvewebsite anofanira kuverenga nekufungisisa magwaro-e--bvumirano evhidhiyo yewebsite. Ikoko, zvisinei, zvisinei nemamiriro ezvinhu apo inobvumidzwa kuputsa mitemo yebasa; yeuka, Kuremekedza Mutemo uye Kufarira kwevanhu vose ndeye imwe yemitemo mina. Semuenzaniso, pane imwe nguva, zvose Verizon neAt & T vaiva nemitemo yebasa iro rakadzivirira vatengi kuti (Vaccaro et al. 2015) . Handifungi kuti vatsvakurudzi havafaniri kungoerekana vachisungwa nemashoko aya-e-service zvibvumirano. Zvakanaka, kana vanotsvakurudza vanotyora mazwi-e-masangano, Soeller et al. (2016) kutsanangurira chisarudzo chavo pachena (ona, kureva, Soeller et al. (2016) ), sezvinoratidzirwa nekutaura pachena. Asi kuzarura uku kunogona kuzarura vatsvakurudzi kuwedzera njodzi yemutemo; muUnited States, somuenzaniso, Computer Fraud uye Mutemo weHurumende zvinogona kuita kuti zvibvumirwe kuputsa mitemo-ye-service zvibvumirano (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) . Pano kukurukurirana pfupi kunoratidza, kusanganisira kuterera mumitemo yakanaka kunogona kukonzera mibvunzo yakaoma.
Mukuwedzera pakuteerera, Ruremekedzo rweMutemo uye Rwenharaunda Rumwewowo rinokurudzira kuve pachena-kuve nekuzvidavirira , izvo zvinoreva kuti vanotsvakurudza vanofanira kujekesa nezvezvinangwa zvavo, nzira, nemigumisiro pamatanho ose ekutsvakurudza kwavo uye kutora mhosva yezviito zvavo. Imwe nzira yekufunga pamusoro pekunzwa pachena-kuve nekuzvidavirira ndeyekuti iri kuedza kudzivirira vanhu vekutsvakurudza kuita zvinhu muchivande. Izvi zvakasununguka-kuzvigadzirisa zvigaro zvinoita kuti huwandu huve nehuwandu hwevanhu munhaurirano dzetsika, izvo zvinokosha kune zvose zvikonzero zvetsika uye zvinobatsira.
Kushandisa purogiramu yekuremekedza Mutemo uye Kufarira kwevanhu kune zvidzidzo zvitatu izvi zvinoratidzwa pano zvinoratidza zvimwe zvezvinongorori vatsvakurudzi vanotarisana kana zvinouya kumutemo. Semuenzaniso, Grimmelmann (2015) akatsigira kuti Kutapukira kweEmotional kunogona kunge kusina mutemo muHurumende yeMadlands. Kunyanya, Maryland House Bill 917, yakapera muna 2002, inowedzera Common Rule kudzivirirwa kune tsvakurudzo dzakaitwa muRondon, pasina hupfumi hwemari (nyanzvi dzakawanda dzinofunga kuti Epotional Contagion yakanga isina pasi pe Common Rule pasi pe Federal Federal nokuti yakaitwa pa Facebook , sangano risingagamuchiri mari yekutsvakurudza kubva kuhurumende yeUnited States). Zvisinei, dzimwe nyanzvi dzinofunga kuti Maryland House Bill 917 iyo pachayo inopesana nepamutemo (Grimmelmann 2015, 237–38) . Kuita zvekutsvaga munharaunda haisi vatongi, uye saka havakwanisi kuti vanzwisise uye vaongorore bumbiro remitemo yematunhu makumi mashanu eSouth America. Izvo zvinonetsa zvakawedzerwa mumapurogiramu enyika. Zvakare, somuenzaniso, zvakabatanidza vatori vechikamu kubva kunyika 170, izvo zvinoita kuti kutenderwa kwepamutemo kunetseke zvakaoma. Mukupindura kumamiriro asina kukodzera emutemo, vatsvakurudzi vanogona kubatsirwa nekuongorora kwekodzero dzezvematongerwe enyika kwebasa ravo, zvose sekupa mazano pamusoro pemitemo yepamutemo uye sekuchengetedzwa kwemunhu pachake kana mutsvakurudzo yavo isingabvumirwi nemutemo.
Kune rumwe rutivi, zvese zvidzidzo zvitatu zvakabudisa mhinduro dzavo mumabhuku ezvidzidzo, zvichiita kuti kuve pachena-kutarisirwa kwekuzvidavirira. Ichokwadi, Kutapukira kweEmotional kwakabudiswa mufomu rekuwana rusununguko, saka boka rekutsvakurudza nehuruzhinji rakaparidzirwa-shure kwechokwadi-pamusoro pekugadzirwa nemigumisiro yehutsva. Imwe nzira inokurumidza uye yakaipa yekuongorora pachena -kuzvidavirira kwekuzvidavirira ndeyokuzvibvunza iwe: ndingadai ndakagadzikana here kana mitsva yangu yekutsvakurudza yakanyorwa pamusoro pepamberi pepepanhau rangu reguta rekuguta? Kana mhinduro yacho iiwa, ipapo icho chiratidzo chokuti tsvakurudzo yako inogona kudiwa kuchinja.
Mukupedzisa, Bhermont Report ne Menlo Report inopa mazano mana anogona kushandiswa kuongorora tsvakurudzo: Kuremekedzwa kwevanhu, Kubatsirwa, Kururamisira, uye Kuremekedza Mutemo uye Kufarira. Kushandisa aya mazano mana pakuita haisi nguva dzose yakananga, uye inogona kudikanwa kuenzanisa. Semuenzaniso, maererano nechisarudzo chekuti vagovani vekukakavara vanobva pamagumisiro emupfungwa, zvinogona kuonekwa sekuti Kuremekedzwa Kwevanhu kunogona kukurudzira kubvunzurudza, asi kubatsirwa kunoridzikisa (kana kukakavara kunogona kukuvadza). Hapana nzira yekutsanangurira mitemo iyi yakakwikwidzana, asi iyo mitemo mina inobatsira kutsanangura kushandiswa kwebasa, zvinoratidza kuchinja kune zvitsvakurudzo zvakagadziriswa, uye kuita kuti vatsvakurudzi vatsanangurire kufunga kwavo kune mumwe nemumwe.